Indlu encane ebukekayo i-Longenkollen - I-Airbnb
Indlu encane ebukekayo i-Longenkollen
323 okushiwo abanye
Indlu encane ibungazwe ngu-Elsebeth
U-Elsebeth Ungumbungazi ovelele
Indlwana evamile yase-Norway, ethokomele kakhulu endaweni eluhlaza (noma emhlophe ebusika) enokuthula.
Indlwana ekuqaleni yakhiwa njengendawo ezinzile.
Ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya e-Longenkollen Ski Jump.
Imizuzu engu-5 uhamba ngezinyawo ukuya e-Metro.
Bona futhi ifulethi elibukekayo endlini efanayo (ngaphansi kombungazi)!
Le ndlu encane yakhiwa eValdres ngonyaka ka-1850. Ekuqaleni yayisetshenziswa njengesitebele nendlwana (ukuthola ukudla okwengeziwe) endleleni nezilwane ezikhuphukela ezintabeni entwasahlobo futhi zehla ezintabeni ngemva kwehlobo.
Yabe isithuthelwa e-Oslo futhi yagcina yakhelwe kabusha indawo yokuhlala enemfudumalo kuzo zonke izitezi ngaphezu kweziko kanye nendlu yokugezela eneshawa.
Le ndlu iseduze kakhulu nezinkuni ezinkulu zase-Oslo ezibizwa nge-Nordmarka. Uzobe ulala eduze komfula omncane omuhle onomsindo wamanzi ngaphandle kwalapho isimo sezulu somile kakhulu. Amanzi amaningi kuwo entwasahlobo nasekwindla.
Alikho ikhishi elihlukile, kodwa isiqandisi esincane, umshini we-capsule wekhofi, iketela lamanzi kanye nohhavini omncane oneziqongo ezimbili zokupheka. Kodwa amanzi kuphela endlini yokugezela.
Uma ufuna ukuwasha izingubo kunomshini wokuwasha ungawuboleka kwelinye ibhilidi kuleyo ndawo.
Sivame ukubona izinyamazane engadini kanye nezintuthwane noma isicabucabu ngezikhathi ezithile njengasehlathini. Banobungane ngokuphelele.
4.95 · 323 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-323
Umhlahlandlela omuhle wokubukwayo nemisebenzi i-TripAdvisor kanye ne-VisitOSLO.
Sicela utshele uma kukhona noma yini esingakusiza ngayo ngaphambi noma phakathi nokuhlala kwakho! Sicela futhi utshele uma unezifiso ezikhethekile zamahora okungena noma isikhathi sokuphuma futhi sizobona ukuthi yini esingakwenzela yona!
Kubalulekile ukwazi - kubantu abanenkinga ngokuphefumula/isimo - noma ukuba nezinkinga zokuphatha - lokho kusuka emgwaqweni - ukuya emgwaqweni wangasese - cishe amamitha angu-80-100 ukuya emnyango - akunakwenzeka ukushayela uye emnyango.
Sicela utshele uma kukhona noma yini esingakusiza ngayo ngaphambi noma phakathi nokuhlala kwakho! Sicela futhi utshele uma unezifiso ezikhethekile zamahora okungena noma isikhathi…
UElsebeth Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Oslo namaphethelo